Somalia oo qabaneysa tartan ay FIFA ku bixisay aduun dhan $50,000 (Ogow waa markii ugu horreeysay ee dunida noociisa laga qabto) – Gool FM
Somalia oo qabaneysa tartan ay FIFA ku bixisay aduun dhan $50,000 (Ogow waa markii ugu horreeysay ee dunida noociisa laga qabto)
Kaafi September 15, 2016
(Muqdisho) 15 Sebt 2016. Somalia ayaa curisay horyaalkii Kubadda Cagta ebid ugu horreeyey ee carruurta da’dooda ka hooseeyso 15-ka sano kaddib markii ay FIFA bilowday barnaamij lagu bartilmaameedsanayo in uu fursado loogu abuuro ciyaaryahanada da’yarta ah.
Kubadda Cagta dib u dhac ayaa ku yimi kaddib markii dalkan geeska Africa ku yaal uu ka qarxay dagaal sokeeyo laakiin hada waxaa arintaas badalay xiriirka kubadda cagta Somalia (SFF) iyo FIFA.
Waxyaabaha ay FIFA ku taageereyso waxaa ka mida qalab la siiyey 10 kooxood oo middiiba haysata 20 ciyaaryahan waxaana ka mida agabkaas garamadaha tababarka, funaanado, daba gab yaal, baasajeeriyo, sharabaado, kabo iyo agabka goolhayeyaasha waxaase intaa u dheeraa Kubaddo, lacag dhan $50,000 (Konton kun oo doolarka Mareeykanka ah) oo ay sii dheertahay tababaro loo fidiyey garsooreyaal taas oo qofkiiba lagu taageeray lacag dhan $5,000 (Shan kun oo doolarka mareeykanka ah) oo ay la socdaan agabka lagu bixiyo ka qeyb galidda.
Ka faa’ideystetaashii ugu dambeeyey waxa ay ahaayeen 12-ka kooxood ee ka qeyb qaatay tartankan markiisii ugu horreeysay la qabtay oo ay maamuleysay xiriirka Kubadda Cagta Somalia (SFF) barnaamijkeeda horumarinta dhallinyarada oo bilowday bishii September. Tartankaas waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee ay qabtaan xiriirka Kubadda Cagta Somalia oo ay maalgalineysay FIFA xarunteeda cusub ee farsamada.
“Waxaa mahad leh FIFA oo naga caawisay in aan u bilowno tartankan Kubadda cagta ee quruxda badan carruurteena,” sidaas waxaa yiri madaxweynaha xiriirka Kubadda Cagta Somalia Cabdiqani Saciid Carab.
Madaxweynaha SFF waxa uu intaa ku daray in hadii aysan jiri lahayn taageerada dhaqaale iyo agab ee haayada maamusha Kubadda Cagta dunida, horyaalka cusub in uusan guuleysteen. “Anaga oo taageero ka heleyna barnaamijka horumarinta dhallinyarada ee FIFA, tartanka kubadda cagta ee dhallinyarada waxaa la agaasimi doonaa sanad walba,” ayuu yiri madaxweynaha.
Da’yar dhex dhexaadiyeyaak ah iyo tababareyaal, kuwaas oo ay tababartay barnaamijka horumarinta dhallinyarada ee FIFA ayaa sidoo kale ka faa’ideysanaya ka qeyb galka tartanka kaas oo socon doonaa muddo lix bilood ah.
“Hadafka ugu muhiimsan ee laga leeyahay tartankan da’yarta ah waxa weeye in carruurta wax la baro iyada oo loo marayo Kubadda Cagta oo looga gol leeyahay soo saaridda ciyaaryayano da’yar ah oo hibo leh kuwaas oo matali kara 17xulalka da’dooda ka hooseeyso 17 iyo 20 kaddibna toos u gala xulka weyn mustaqbalka dhaw.”
EEG: Afar kaarto oo uu Conte ku wajihi karo Klopp habeen dambe
Sababta ay Chelsea u wal wali karto John Terry la'aantiis in ay wajahdo Liverpool habee dambe